Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Algeria » Algeria kewapụrụ Morocco mmekọrịta
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Algeria • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mbelata mmekọrịta diplọma n'etiti Algeria na ala Morocco na -amalite site na Tuesday mana ndị nnọchi anya mba ọ bụla ka ga -emeghe.
Algeria belatara mmekọrịta mbaụwa na ala Morocco.
Mmebi mmekọrịta n'etiti Algeria na Morocco na -amalite ozugbo.
Algeria na Morocco enwechala mmekọrịta kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Onye minista mba ofesi Algeria Ramdane Lamamra kwupụtara taa na obodo ahụ na -ebipụ mmekọrịta mba ofesi na ala Morocco.
Lamamra kwuru na nnọkọ akụkọ na Tuesday, na -agbakwụnye na Algeria ekpebiela ịbelata mmekọrịta mba ofesi na ala Morocco site na taa, na -agbakwụnye na nkwụsị mmekọrịta mba ofesi bụ n'ihi 'omume ọjọọ' nke mba agbata obi.
Onye ozi ahụ kwuru, "alaeze Morocco akwụsịbeghị omume ọjọọ ya megide Algeria."
Onye ozi ahụ rụtụkwara aka na nkwado Morocco maka ọkwa onye nlele maka Israel na African Union dịka otu ihe kpatara mkpebi a.
Algeria na Morocco enwewo mmekọrịta dị njọ ruo ọtụtụ iri afọ, ọkachasị n'okwu gbasara Western Sahara.
Mbelata mmekọrịta diplọma dị irè site na Tuesday mana ndị nnọchi anya mba ọ bụla ka ga -emeghe, Lamamra kwuru.
Ministri mba ofesi Morocco ekwughị ozugbo maka mmepe a.
Eze Morocco nke isii nke Morocco kpọrọ oku ka emeziwanye mmekọrịta ha na Algeria.
Algeria n'izu gara aga kwuru na ọkụ ọgbụgba na -egbu egbu bụ ọrụ otu ọ kpọrọ "onye na -eyi ọha egwu", nke otu n'ime ha kwuru na Morocco kwadoro ya.
Ọkụ n'oké ọhịa dị na Algeria, nke malitere na August 9 n'etiti oke ọkụ na -enwu enwu, gbara ọkụ iri puku hectare nke oke ọhịa ma gbuo opekata mpe mmadụ 90, gụnyere ihe karịrị ndị agha 30.
Ndị ọchịchị Algeria egosila mkpịsị aka maka ọkụ na ngagharị nnwere onwe nke mpaghara Berber nke Kabylie, nke gbadara n'akụkụ oke osimiri Mediterenian n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke isi obodo, Algiers.
Ndị ọchịchị boro ndị otu Movement for Self-decision of Kabylie (MAK) ebubo na ha tinyere aka n'igbu nwoke ebubo ebubo ọkụ, ihe mere kpatara oke iwe.